Hongkong - Philipp - Taiwan (Star Cruise) | GO & GO Travels
၂၀၁၇ ခုနှစ်၏ ( ၅ ) ည အိပ်
ဟောင်ကောင် - ဖီလစ်ပိုင် – တိုင်ဝမ် Star Cruise Virgo ခရီးစဉ်
Departure date : March ( 17,22, & 27 ) / April (1,6,11,16,21 & 26) / May ( 1,6,11,16,21, & 26 )
Day 1 Yangon –Hongkong( Dinner )
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်မှ ဟောင်ကောင်မြို့ သို ထွက်ခွါပါမည်။ ဟောင်ကောင်သို့ ရောက်လျှင် သဘောင်္စတင်ထွက်ခွါမည့် ဆိပ်ကမ်းရှိရာ ကောင်းလုံ ရှိ Tsimshatsui ရှိ၊ ဟာဗာစီတီး၊ အိုးရှင်းတာမင်နယ် သို့့ထွက်ခွါပါမည်၊ ကားမောင်းချိန် ( ၂ ) နာရီခွဲခန့် ကြာမြင့်ပါမည်။ Star Cruise Virgo သဘောင်္သည်၊ ဆိပ်ကမ်းကို နေ့ လည် ( ၁၂း၀၀ ) အချိန်တွင်ဆိုက်ရောက်မှာဖြစ်ပြီး၊ ထိုဆိပ်ကမ်းမှ ည ( ၂၃း၃၀ ) အချိန်တွင် ပြန်လည်ထွက်ခွါမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်္ဘောပေါ် တက်ရောက် ရမည့်အချိန်မှာ ညနေ ( ၂၀း၀၀ ) ဖြစ်ပြီး၊ ည ( ၂၁း၀၀ ) အချိန်တွင် သင်္ဘောတက်ခွင့်ဂိတ်ကို ပိတ်မှာဖြစ်သောကြောင့်၊ ဧည့်သည်များမှ သဘောင်္ပေါ်ကို ဂိတ်ပိတ်ချိန် မတိုင်ခင်အရောက် လာပြီး၊ Check in လုပ်ရပါမည်။ သင်္ဘောသည် ဆိပ်ကမ်းမှ ( ၂၃း၃၀ ) အချိန် တွင်စတင်ထွက်ခွါပါမည်။ သင်္ဘောပေါ်တွင် ညနေစာကို မိမိတို့စိတ်ကြိုက်သုံးဆောင်နိုင်ပြီး၊ သင်္ဘောပေါ်ရှိ အမျိုးမျိုး သော ပြပွဲများကိုလည်းပျော်ပျော်ပါး ပါးကြည့်ရှုနိုင်သလို၊ ဃျေငညသ ကစားချင်ပါကလည်း၊ ၀င်ရောက်ကစားနိုင်ပါသည်။ င်္ဘောပေါ်တွင် ညအိပ်ပါမည်။
Day2HighSeas ( B/L/D )
Day3မနီလာမြို့ ၊ ဖီလစ်ပိုင် ( B/L/D )
နံနက် ( ၀၈း၀၀ ) အချိန်တွင် ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ မနီလာမြို့ သို့ ဝင်ရောက်ပါမည်။ ညနေ ( ၁၈း၀၀ ) အချိန်တွင် မနီလာမြို့ မှ လာအော့ သို့ခုတ်မောင်းပါမည်။
Day4Laoag, Philippne ( B/L/D )
နံနက် ( ၁၀း၀၀ ) အချိန်တွင် ဖီလစ်ပိုင်နိုင်ငံ၊ လာအော့မြို့ သို့ ဝင်ရောက်ပါမည်။ ညနေ ( ၁၉း၀၀ ) အချိန်တွင် မနီလာမြို့ မှ လာအော့ မှထိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၊ kaohsiung သို့ပြန်လည်ထွက်ခွါပါမည်။
Day5Kaohsiung, Taiwan( B/L/D )
နံနက် ( ၁၀း၀၀ ) အချိန်တွင် တိုင်ဝမ်နိုင်ငံ၊ kaohsiung မြို့ သို့ရောက်ရှိပါမည်။ တိုင်ဝမ်မှ ( ၁၉း၀၀ ) အချိန်တွင်၊ ဟောင်ကောင်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ထွက်ခွါပြီး၊ ဟောင်ကောင်၊ ကောင်းလုံဆိပ်ကမ်းသို့( ၁၃း၀၀ ) အချိန်တွင် ပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။ မိမိတို့ မှ သဘောင်္ပေါ်မှ ပြန်လည်ဆင်းသက်ကာ၊ လေယာဉ်ကွင်းသို့မိမိတို့ ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။
--------------------------- ပျော်ရွှင်ဖွယ်သင်္ဘောခရီးစဉ်ပြီးဆုံးပါမည်။ ------------------------------
Please Note :I would like to inform Star Cruise Virgo's Promotion. These rate are cruise rate only and 50 % discount for DD - BA Cabinand 40 % discount for AE - AA Cabin. Moreover For 30 Days Advance Booking : Additional 15% off the promotional rate is applicable to All Person.
၈၅၀USD ( Per person ) with Promotional 50 % Room Cabin Typr: If you choose DS,DA,DB,DC, DD
၁၀၀၀ USD ( Per person ) with Promotional 50 % Room Cabin Typr : If you choose CS,CA,CB,CC,CD
Inclusions of Cruise Fare
Meals in the inclusive restaurants (Beverages like Soft drinks/juices/wines/liquors etc. – Not included)
Entertainment & Performances in Theatre & Lounges
Use of specific Recreational and Gym Facilities
4 nights on boat ( Double room )
Exclusion of Cruise Fare
International Air ticket ( Yangon – Hong Kong – Yangon )
Hongkong Visa ( Double Entries ) ( 80 ) USD
Note: All the visitors are not required to get Taiwan Visa anyhow USD 1,000 per person will be collected as the security deposit and will return back upon showing the passport after the trip.
အကယ်၍မိမိ Booking တင်သည့် အချိန်တွင် DA နှင့် DD Cabin အခန်းများ လူပြည့်သွားပါက အောက်ပါ အခန်းများကို တင်ယူနိုင်ပါသည်။ ဈေးနှုန်းများမှာ
AA/AB Cabin - 2253 USD ( Per person )
AC to AD Cabin - 1495 USD ( Per person )
BA to BC Cabin - 1193 USD ( Per person )
AE Cabin - 1193 USD ( Per person )
CA to CD Cabin - 1295 USD ( Per person )